Maxaa looga hadlay kulankii dhexmaray taliyaha ciidanka booliska Somaliya iyo James Swan? +(SAWIRRO) – HalQaran.com
Maxaa looga hadlay kulankii dhexmaray taliyaha ciidanka booliska Somaliya iyo James Swan? +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliya, Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, ayaa Arbacadii maanta kulan la qaatay Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya James Swan.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimaha ciidamada Booliska iyo doorka ay ka qaataan suggida ammaanka dalka.
Taliyaha Ciidamada Booliska ayaa warbixin wuxuu siiyay Wakiilka Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya, waxaana uu uga warbixiyay shaqooyinka ay qabtaan ciidanka iyo sida ammaanka ay u sugaan.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa dhankiisa ammaanay shaqada adag ee ay hayaan Ciidamada Booliska Soomaaliya, waxaana uu ku ammaanay hanaanka ay u sugaan ammaanka.
Tags: taliyaha ciidanka booliska Somaliya iyo James Swan
UPDATE: Weriyihii gaarka ahaa ee madaxweynaha Puntland oo lagu xiray magaalada Garoowe